Jarusaaleem: Israa'eel Buufata baaburaa maqaa Tiraampiin mogga'e naannoo Dallaa dhagaa dhihaatti ijaaruufi - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Caamsaa darbe, Doonaald Traamp Pireezidentii Ameerikaa isa jalqabaa osoo aangoorra jiru Dallaa dhagaa dhihaa daawwate ta'eera.
Ministirri Geejibaa biyyattii Yisra'eel Kaatz magaala Jarusaaleem umurii dheeraa qabdutti buufata baaburaa lafa jalaa ijaaruun maqaa Doonaald Traampiin moggaasuu akka barbaadaan beeksisaniiru.
Pireezident Traamp magaalaa Jarusaaleemiin akka magaala guddoo Israa'eelitti beekamtii kennuufi isaaniitiif galateefachuu akka barbaadaan obbo Kaatz himaniiru.
Dallaan dhagaa dhihaa Jarusaalem keessatti lafa qulqulla'aa warri Israa'eel akka iitti kadhaataniif bakka hayyamameefiidha.
Sararri baaburaa diriirfamuuf karoorfamee fi buufanni baaburaa ijaaramu qaama sarara baabuuraa saffisaa Tel Aaviiv irraa eegalee dhufu yommuu ta'u bara dhufu hojii eegala jedhameera.
Kana dura Israa'eel naannoo Dallaa dhagaa dhiiyaa dhiyeenya lafa musliimonni Haraam Al Shariif jedhanii waamaniifi Israa'eeloonni mana qulqullummaa Moont jedhanii beekan biratti hojii ijaarsaaf lafa qotuu eegaluun ishee paalestaayinoota mormiif kakaasee ture.
Dhaabbata biyyoota gamtoomaniiitti Ejeensiin Aadaa UNESCOn, bakka sana hambaa addunyaa ittiin jedhee sababa jiruuf dhimmicha irratti yaaddoo akka qabu ibsee ture.
Ibsa Obbo Kuutz gaazexaa Yedi'ooz Ahronooz jedhamuuf kennaniin sarara daandii baaburaa Tel Aavivii hanga Jarusaaleemitti diriirfamu kun ministeera geejibaatiif 'proojectii baayyee fayidaa qabeessa' jedhaniiru.
Daandii baaburaa lafa jalaa kiiloomeetira 3 naannoo Biinyani'ee Haa Uumaa irraa ka'ee hanga lafa qubannaa baha Jeerusaaleemitti jiru akka ijaaramu raggaasisuu isaaniis beeksisaniiru.
Ujummoon lafa jala diriiru kun lafarraa meetira 52 asii gad fagaatee buufataalee lama yoo qabaatu inni duraa siitii seenter jedhama bakka daandiin jaafaa fi Kiing Joorji itti walqunnamanii dha. Kan lammataa ammoo Doonaald Traamp jedhama kutaa magaala Jarusaaleem hadhuura warra Israa'eelii taatee Kaardoo jedhamutti ijaarama jedhameera.
''Koteel( dallaan dhagaa dhihaa) lammilee Isaa'eeliif lafa qulqullaa'aa waan ta'eef buufata baaburaa garas geessu maaqa pireezidenti Ameerikaa Doonaald Traampiin akka mogga'u murtaa'e. Jarusaalem teessoo mootummaa Israa'eel akka taate beekamtii kennuu isaatiin gootummaa fii murtee seena qabeessa murteesse kanaaf nutis beekamtii kenninaaf'' jechuun dubbataniru oobo Kaatzi.
Murteen Traamp jalqaba ji'aa kanaatti dabarsanii fi qophii biyyattiin Eembasii ishee Tel Aaviiv irraa gara Jarusaaleemitti dabarsuuf gochaa jirtu hooggantoota Paalestaayiniin balaaleefaatamee, naannoo Westbaankii fi ulaa gaazaatti ammoo jeequmsa uumeera.
Torbee darbe miseensonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii ya'ii waliigalaa isaaniirratti murtee Ameerikaa kan fudhatama dhabsiisanii murtichi akka haqamu gaafataniiru.
Ameerikaan gama isheen murtee dhaabatichaa hin fudhadhu kun ejjennoo akka biyya ofdandeesse tokkootti fudhatame dha jechuun warreen yaada ishee morman irraa deeggarsa maallaqaa kennitu addaan kutuuf dhaadateetti.
Dhimmi Jarusaaleem dhimma ijooo walitti bu'iinsa Israa'eeliifii Paalestaayiin jidduu jiruuti.